स्तन क्यान्सर : लक्षण, जोखिम र बच्ने उपाय – Health Post Nepal
२०७८ माघ १५ गते १८:४०
काठमाडौं – विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार महिलामा सबैभन्दा बढी हुने क्यान्सर स्तन क्यान्सर हो। तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ कि स्तन क्यान्सरले विश्वभर हरेक वर्ष लगभग २० लाख १० हजार बढी महिलाहरूलाई प्रभावित गर्छ। डब्लुएचओका अनुसार सन् २०१८ मा मात्रै स्तन क्यान्सरबाट मृत्यु हुने महिलाको संख्या ६२ हजार ७०० थियो। यसले क्यान्सरबाट हुने महिलाको मृत्युको १५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखाउँछ।
स्तन क्यान्सर एक अवस्था हो जब निश्चित जीनहरूमा परिवर्तन हुन्छ तब स्तन कोशिकाहरू विभाजित हुन्छन् र अनियन्त्रित रूपमा बढ्न र फैलन थाल्छ। सामान्यतया, क्यान्सर दूध उत्पादन गर्ने ग्रन्थीहरू (लोब्युल) वा त्यसको बाटो (नलीहरू) मा हुन्छ। जसले दूधलाई ग्रन्थीबाट निप्पलमा लैजान्छ।
स्तनको फ्याटी वा रेशेदार ‘कनेक्टिभ टिस्यु’ पनि क्यान्सर कोशिकाहरूको लागि हटस्पट हुन सक्छ। केही अवस्थामा, क्यान्सर कोशिकाहरू तपाईंको पाखुरामुनि लिम्फ नोडहरूमा पुग्न र शरीरका विभिन्न भागहरूमा फैलिन सक्छन्।
स्तन क्यानसरका प्रकार
स्तन क्यान्सरका विभिन्न प्रकार र चरणहरू हुन्छन्। पुरुषहरूमा पनि स्तन क्यानसर हुनसक्छ तर, त्यस्ता घटनाहरू कम छन्। मूख्य रुपमा दुई प्रकारका स्तन क्यान्सरहरू छन् – इन्भेसिव (छिटो फैलिने) र नन-इन्भेसिव (ढिलो फैलिने)। ८० प्रतिशत स्तन इन्भेसिव डक्टल कार्सिनोमाका कारणले हुन्छ। यस प्रकारको स्तन क्यान्सरमा क्यान्सर नलीको पर्खाल हुँदै स्तनको बोसोमा पुग्छ। जबकि नन-इन्भेसिवमा स्तन क्यान्सर कोशिकाहरू तन्तुको उत्पत्ति क्षेत्रभन्दा बाहिर बढ्दैनन्।
यी बाहेक, स्तन क्यान्सरका अन्य दुई प्रकार छन्। यद्यपि, ती धेरै दुर्लभ छन्। जस्तै इन्फ्लामेटरी स्तन क्यानसर। यो क्यान्सरका केसहरू १ प्रतिशतभन्दा कम छन्। तर यो क्यान्सर धेरै छिटो फैलिन्छ र महिलाहरू पनि यसबाट मृत्युको उच्च जोखिममा हुन्छन्। यसबाहेक चौथो प्रकारको स्तन क्यान्सर पेजेट डिजिज हो। यो क्यान्सरमा निप्पलको भाग पूर्णतया कालो हुन्छ। यस प्रकारको क्यान्सर ५ प्रतिशतभन्दा कममा हुन्छ।
स्तन क्यानसरका लक्षण
सुरुमा स्तन क्यान्सर एसिम्प्टोमेटिक हुन सक्छ, अर्थात् लक्षणहिन हुनसक्छ। स्तन क्यान्सरका लक्षणहरू पनि स्तन क्यान्सरको प्रकारमा निर्भर हुन्छन्। यद्यपि, स्तन क्यान्सरको सबैभन्दा सामान्य लक्षण भनेको गाँठो हो। तर यो पनि ध्यानमा राख्नुहोला कि हरेक गाँठो क्यान्सर होइन। स्तन क्यान्सरका केही लक्षणहरू –
-स्तनमा कडा ‘गाँठो’ भएको महसुस हुनु। सामान्यतया यस्ता गाँठाहरु पीडारहित हुन्छन्।
-निप्पलबाट फोहोर रगत जस्तो तरल पदार्थ निस्कने
-स्तनको आकारमा परिवर्तन आउने
-अन्डरआर्ममा गाँठो वा सुन्निनु
-निप्पलमा रातोपन आउनु आदि।
तर, यी लक्षण स्तन क्यान्सरबाहेक अन्य रोगको कारणले पनि हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् र आवश्यक परीक्षण गराउनुहोस्।
स्तन क्यानसरको कति चरण हुन्छ?
पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार यस क्यान्सरका विभिन्न चरणहरू छन्। ट्यूमरको आकार र तिनीहरूको फैलावटको आधारमा चरणहरू विभाजित हुन्छन्।
स्टेज ० – यस चरणमा क्यान्सर कोशिकाहरू स्तनको नली बाहिर फैलिएका हुँदैनन्। यतिसम्मकी स्तनको बाँकी भागमा पनि पुगेको हुँदैन।
स्टेज १- यस चरणमा ट्युमर २ सेन्टिमिटरभन्दा बढी चौडा हुँदैन र लिम्फ नोड्स पनि प्रभावित हुँदैनन्। तर क्यान्सर कोशिकाहरू आकारमा बढ्न थाल्छन् जसले स्वस्थ कोशिकाहरूलाई असर गर्न थाल्छ। यद्यपि, तिनीहरूको आकार ०.२ मिमी देखि २ मिमीबीच हुन्छ। केहि अवस्थामा तिनीहरू आकारमा २ मिमीभन्दा ठूलो हुनसक्छ।
स्टेज २- यस स्टेजमा स्तन क्यान्सर आफ्नो आकारभन्दा बाहिर अन्य भागमा फैलिन थाल्छ। यो चरणमा यस्तो पनि हुनसक्छ कि यो अन्य भागहरूमा पनि फैलिन सक्छ।
स्टेज ३- स्तन क्यान्सरको यो स्टेज गम्भीर हुन्छ। यस चरणमा क्यान्सर हड्डी वा अन्य अंगहरूमा फैलिन थाल्छ। यस बाहेक, यो पाखुरामुनि ९ देखि १० लिम्फ नोड्स र कलर बोन मा यसको एक सानो भाग फैलन सक्छ।
स्टेज ४– यस स्टेजमा ट्युमर जुनसुकै साइजको हुन सक्छ र क्यान्सर कोशिकाहरू शरीरको कुनै पनि भाग जस्तै कलेजो, हड्डी, मिर्गौला र मस्तिष्कमा फैलिन सक्छन्।
स्तन क्यान्सरको जोखिम
स्तन क्यान्सरको मुख्य कारण वा क्यान्सरको कुनै पनि रूपको कारण अझै पत्ता लागेको छैन। यद्यपि, स्तन क्यान्सरको लागि जिम्मेवार हुन सक्ने केही कारकहरू निम्न छन्:
उमेर: स्तन क्यान्सरका अधिकांश घटना ५५ वर्षभन्दा माथिका महिलाहरूमा देखिन्छन्।
लिङ्ग: स्तन क्यान्सर अधिकांश महिलाहरुमा हुन्छ। यद्यपि यो पुरुषहरूमा पनि हुन सक्छ। पुरुषहरूमा स्तन क्यान्सर दुर्लभ छ। विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूमा यो क्यान्सरको घटना धेरै उच्च छ।
आनुवंशिक प्रवृत्ति: BRCA1 र BRCA2 नामक जीनहरूमा हुने उत्परिवर्तनले तपाईंमा स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ।
चाँडै महिनावारी सुरु हुनु: १२ वर्षको उमेरअघि महिनावारी सुरु हुने महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ।
बढी उमेरमा आमा बन्नु: ३५ वर्षको उमेरपछि आफ्नो पहिलो बच्चा जन्माउनु पनि स्तन क्यान्सरको लागि जोखिम हुनसक्छ।
हर्मोन थेरापी: महिनावारी बन्द भइसकेपछि लिइएको एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन औषधिहरूले पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ।
ढिलो महिनावारी बन्द हुनु: ५५ वर्षसम्म पनि महिनावारी बन्द नहुनुले स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ।
यी बाहेक, स्तन क्यान्सरको लागि अन्य कारकहरू पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्। जस्तै पारिवारिक इतिहास, खराब जीवनशैली, असन्तुलित आहार र अत्यधिक मदिरा सेवन आदि।
स्तन क्यान्सरबाट कसरी बच्ने?
-तौल नियन्त्रण गर्नुस्। ३० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका महिलाले आफ्नो तौल सन्तुलनमा राख्नुपर्छ।
-हार्वर्ड नर्स स्वास्थ्य अध्ययन अनुसार, अत्यधिक रक्सी वा धुम्रपान सेवनले स्तन क्यान्सरको जोखिम बढाउँछ। त्यसैले तिनीहरूबाट टाढा रहनुहोस्। यदि तपाईंमा रक्सी पिउने बानी छ भने त्यो बानीलाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्न सुरु गर्नुहोस्।
-नियमित व्यायाम वा शारीरिक क्रियाकलापबाट पनि स्तन क्यान्सर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। दिनको एक पटक अर्थात बिहान वा बेलुका व्यायाम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
-आफ्नो जीवनशैलीमा योग र ध्यानलाई प्राथमिकता दिनुहोस्। योग र ध्यान गर्नाले स्तन क्यान्सरको जोखिम कम हुन्छ।
-आफ्नो आहार पनि सन्तुलित राख्नुहोस्। आफ्नो आहारमा धेरै भन्दा धेरै फलफूल र तरकारीहरू समावेश गर्नुहोस्। आफूलाई हाइड्रेटेड राख्न दैनिक ८ देखि १० गिलास पानी पिउनुहोस्।